Iincwadi ezinkulu ze-7 zabantu abangafundanga | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezi-7 ezinkulu zabangengomafundi
UAlberto Legs | | iintlobo
Kwi-Actualidad Literaria sonke singangena, ukusuka kuwe, bafundi kunye nabathandi boncwadi, ukuya kwabanye abantu abangaze baphele bengena kulonwabo olubandakanya oko. chola incwadi ukonwabele ukufunda.
Ngokuqinisekileyo abanye benu banomhlobo "ongazange abe nexesha lokufunda", okhetha "ukubona imovie endaweni yokufunda incwadi" okanye, ngokuthe ngqo, "ongakuthandiyo ukufunda, ixesha". Kubo, kwabo bangahambi ngaphaya kwephepha 3, nakowuphi na umthandi wokufunda, ngokuqinisekileyo ezinye zazo Ezi ncwadi zisi-7 zibalaseleyo kubantu abangafundanga iba yeyona migaqo ilungileyo.
1 INkosana encinci, uAntoine de Saint-Exupéry
2 Shiddartha, nguHerman Hesse
3 UHarry Potter kunye nelitye lefilosofi nguJK Rowling
4 Ingcali yeAlchemist, kaPaulo Coelho
5 Ehlabathini jikelele kwiintsuku ezingama-80, nguJules Verne
6 Imibongo engamashumi amabini yothando kunye nengoma enomdla, kaPablo Neruda
7 Imfihlelo, nguRhonda Byrne
INkosana encinci, uAntoine de Saint-Exupéry
Ngaphandle kwazo zonke iinoveli ezirhabaxa esizifundileyo, abantu abaninzi basaligcina ezintliziyweni zabo ibali lalaa nkwenkwana imhlophe eye yaphuncuka kwiplanethi ehlaselwe zibaobabs ukuhamba kwindalo iphela kwaye, ngesehlo, isinika izifundo ezingaphezulu kwesinye. INkosana encinci yenye yezo ncwadi umntu angazithanda ngokufunda iintlanzi, kungekuphela ngokulula kokubaliswa kwayo kunye nemizobo yayo emincinci, kodwa ngenxa yokuphakama kokufunda kwayo kunye nokukwazi kwayo ukusibuyisela ebuntwaneni. Iklasikhi epheleleyo.
Shiddartha, nguHerman Hesse
Kuthethwe njengebali, uShiddartha wayengomnye wabo iindlela zokuqala zoncwadi lwaseNtshona kwinkcubeko eyimfihlakalo yaseIndiya. Impumelelo enkulu enkosi ngomsebenzi olungileyo kaHesse, umbhali okwaziyo ukusihambisa siye kwi-Indiya yakudala egcwele iindawo ezingaqhelekanga, abalinganiswa abalula kunye neemfundiso ezinamandla ngalo protagonist ulandela emanyathelweni kaBuddha ade ayokuma emlanjeni. Kwaye andizukuthetha ngaphezulu.
UHarry Potter kunye nelitye lefilosofi nguJK Rowling
Incwadi yokuqala kwi saga yeJK Rowling Ihlala iyinto ebulelayo kwisakhono sembali sokunxibelelana nabantu bayo yonke iminyaka ngebali lokucinga, elilula elithi, ngaphezulu kwako konke, likwenze ufune ngakumbi. Eyona potion ilungileyo ekugqibeleni yokufumana uncwadi, into engenzeki kuphela ngeMbumbi kodwa kunye nezo enye i-sagas yokuthengisa yezigidi Imidlalo yeNdlala, iTwilight Ewe, nazo zidumileyo I-50 shades zegrey (Okanye ngaba akukho mntu unomhlobo oqhelekileyo ongakhange aligqithise iphephancwadi iPronto kwaye ngequbuliso wabambeka kuluncwadi ngendlela ekrokrisayo?). Iincwadi ezizalisekisa ngokugqibeleleyo umsebenzi wazo ogqibeleleyo: ukuloba umfundi, ayisiyonto encinci leyo.
Ingcali yeAlchemist, kaPaulo Coelho
Incwadi yokuqala yombhali waseBrazil yayingu ethengisa kakhulu emva kokupapashwa ngo-1988 enkosi kwindibaniselwano ephikisanayo yokulula kwifom kodwa ubunzulu bomxholo. Uhambo oluya eMantla e-Afrika apho umfundi ebhaptizwa kwangoko kwaye yenye yeencwadi eziphambili zikaCoelho zokuqalisa. Kuya kubakho ixesha lokufunda UVeronica ugqiba kwelokuba afe kunye nezinye izihloko "ezinzima".
Ehlabathini jikelele kwiintsuku ezingama-80, nguJules Verne
Enye yeenoveli zikaVerne ezidumileyo iye yaba liqabane elithembekileyo kubantu abaninzi abancinci abavulelekileyo kwihlabathi ngelixa behamba bephuma kula maphepha akudala apho uPhileas Fogg etyelele iCalcutta, iYokohama okanye iLiverpool kwezinye iindawo ezininzi.
Imibongo engamashumi amabini yothando kunye nengoma enomdla, kaPablo Neruda
Qalisa ukufunda ngombongo Inokuba yintlekele epheleleyo okanye eyona mpumelelo, kwaye kuba sifuna ukuba nethemba siza kubheja kwiindinyana zikaNeruda (ezilula, ezisebenzayo kunye nezendalo) xa siqala ukusebenzisa uncwadi okanye, kule meko, imibongo, into ethi uya konwaba "abangafundi" nabo bafuna ukugqitha ethengwa. Yonke into iyavavanya.
Imfihlelo, nguRhonda Byrne
Sonke siyazi ukuba xa umntu ethathwa "njengonqatshelwe" kuncwadi, kungcono ukumkhuthaza ukuba afunde incwadi anokufumana kuyo izifundo okanye izifundo ezinokuthi zisetyenziswe ngqo kubomi bokwenyani. Ngapha koko, kukho inani elikhulu labafundi abathi khetha iincwadi zokuzinceda, ubumoya okanye ithoni yobudala obutsha kwiiklasikhi ezinkulu zembali uqobo. Imfihlo kunye nokukwazi kwayo ukuhlwayela izimvo ezikhuthazayo kunokuba sisizathu esihle sokuqala ukufunda.
Ezi 7 iincwadi zabantu abangafundanga shwankathela ezinye zezona zibhejo zibalaseleyo xa kufikwa kufundo: izicatshulwa ezimfutshane ezitsibanayo kwaye, kwiimeko ezilungileyo, zidlulisela imfundiso yokuba nkqu nomfundi wexesha elizayo akazukubaleka.
Yeyiphi incwadi oyinike umhlobo wakho ongafundanga okokugqibela?
Ngaba uqala ukufunda kwaye awufumani ncwadi ukuze ikulungele? Mhlawumbi singakucingozela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Iincwadi ezi-7 ezinkulu zabangengomafundi
Iincwadi ezi-5 ezilahlekileyo esingenakuze sifunde
Uncedo lwengqondo (kunye nolwasemzimbeni) lokubhala